Ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - ụlọ ọrụ nrụpụta China
3 G 5 g 10 g 100 g silica gel transperent granule na-achọghị
Akwa nchekwa na enweghị corrosion. Adabara maka ájá-free na-abụghị static nkwakọ. Ngwaahịa ndị a zutere ọkọlọtọ ndị agha US bụ mil-d-3464e, nke bụ ezigbo nhọrọ maka ụlọ ọrụ semiconductor na microelectronics. Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Red antistatic afụ ịse afụ film N'ogbe N'ogbe ụfụfụ film ujo na-eguzogide ọgwụ ụfụfụ film factory kpọmkwem N'ogbe
The mejupụtara mgbochi static afụ akpa mepụtara anyị ụlọ ọrụ jupụta na adịghị ike nke anụ ụlọ mgbochi static akpa (ọtụtụ mgbochi static afụ akpa na-adịghị njọ, mfe ihihi mgbe ogologo oge, na mgbochi-static ujo absorption echekwa arụmọrụ bụ ogbenye). The ngwaahịa nwere ihe abụọ-oyi akwa Ọdịdị: elu Pee conductive film, elu-eguzogide uru bụ 108 ~ 1010'Ω, The oyi akwa nke mgbochi static afụ akpa, elu-eguzogide uru bụ 108 ~ 1010'Ω.
Uhie Uhie Uhie, Igwe nkpuchi ihu, Nkpuchi Manufacturer, Anti Static Afọ Cloth, Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe, Packaging Afọ akpa,